Nagu saabsan - Zhejiang Gaozhong Mashiinka Mashiinka Co., Ltd.
Zhejiang Gaozhong Mashiinka Mashiinka Co., ltd.
Zhejiang Gaozhong Mashiinka Mashiinka Co., Ltd. Waxay ku taalaa Shiinaha Hose Town -Panan County ince Gobolka Zhejiang, waxaa la aasaasay sanadkii 1991, shirkadu inta badan waxay soo saartaa: khadka wax soo saarka tuubbada jiingado caag ah, xarigga wax soo saarka tuuboyinka balaastigga ah, PP / PE / PVC wax soo saarka dhuumaha xariiq, mashiin caag ah, mashiinka jarista, mashiinka fuuli kara, caaryada caaga balaastigga ah iyo noocyada kale ee makiinadaha caaga ah. Waxaan leenahay gurigeena shaqada, sidaas darteed waxaan sidoo kale sameyn karnaa dhammaan noocyada dhuumaha balaastigga ah sida ku xusan codsiga macaamiisha.
Shirkaddu waxay leedahay koox hibooyin farsamo oo aad u wanaagsan, waxayna leedahay tiro badan oo ah qalabka wax soo saarka CNC ee horumarsan. Waxaan kordhinay tirada qalabka sanad walba. Hadda, shirkaddu waxay horay u haysatay 30-40 shaqaale ah, shaqaale kasta wuxuu la joogay shirkadda in ka badan saddex sano .Kulligood waxay leeyihiin teknolojiyad, sidaa darteed waxaan u siin karnaa macaamiisha mashiin tayo sare leh oo qiimo jaban.
KHIBRAD 29 Sano
IN KA BADAN 40 shaqaale
KHATARAHA DALBASHADA WUXUU KA BADHAY 10
1. Qalabka, GZSJ wuxuu ballanqaaday tayada wanaagsan ee 12 bilood.
2. Intii lagu guda jiray dammaanadda, si ula kac ah iyo waxyeelo macmal ah oo aan wax ka beddelin qaybta waxyeellada gaadhay, waxaan si xor ah u dayactiraynaa iyo adeegyo farsamo.
3. In ka badan 12 bilood, iibsaduhu wuxuu u baahan yahay inuu bixiyo kharashka wax soo saar ee qaybta duugoobay, iyo inuu nolosha oo dhan siiyo qeyb ka mid ah qalabka iyo qalabka xorta ah.
Waxaan haynaa in ka badan 15 sano oo naqshadeyn iyo khibrad horumarineed oo loogu talagalay mashiinka balaastigga ah ee ku habboon ee aad u baahan tahay. Zhejiang Gaozhong Mashiinka Mashiinka Co., Ltd. waa shirkad hawleed ku takhasustay naqshadaynta iyo soo saarista mashiinka caagga ah. Shirkadeena waxaa si fiican looga yaqaan gudaha iyo dibada labadaba alaab tayo sare leh iyo nidaamyo adeeg dhameystiran.
Suuqa ugu weyn : Fiyatnaam, Hindiya, Masar, Urdun, Afgaanistaan, Bariga Dhexe, IWM
Waxaan kordhinay tirada qalabka sanad walba. Waxaan diiradda saarnaa hagaajinta iyo horumarinta qalabka wax soo saarka dhuumaha jiingado caag ah muddo 20 sano ah. Iyadoo tiknoolajiyada wax soo saarka gudaha ee horseedka ah, shirkaddu waxay heshay horumar degdeg ah. Mashiinka balaastiga ah ee shirkadda iyo qalabka ayaa lagu dabaqi karaa soo saarista dhammaan noocyada kala duwan ee fiilada xargaha gawaarida jiingada, siligga iyo tuubada fiilooyinka fiilooyinka, laambadaha qurxinta iyo tuubbooyin faynuus ah, tubbada biyaha iyo tuubbada tubada mashiinka dharka lagu dhaqdo, tuubooyinka hawo-qaboojinta, tuubada caafimaadka, tuubada telescopic iwm .... Sanadihii la soo dhaafay, waxaan siineynaa alaab tayo sare leh GREE, Midea, Haier, Little Swan, iyo dhowr shirkadood oo caan ah.
Shirkaddu waa inay kaqeybqaadataa bandhigyo kala duwan oo gudaha iyo dibedda ah sanad kasta, sidoo kale waxaan ku tusi doonnaa khadka wax soo saarka tuubbada jiingadda ah ee bandhigga qof walbana wuu arki karaa. Waxaan kuu sharxi doonaa sida mashiinku u shaqeeyo, waa maxay waxyaabaha dhammaan faahfaahinta.
Tayada ugu fiican waa jihada dadaalkeena. Sumcad wanaag waa waxa aan ku adkeyno.